UMuzomusha Lameck Chamane – The Ulwazi Programme
UMuzomusha Lameck Chamane
USpensei Muzomusha Lameck Chamane wazalelwa eThekwini ngo-1941. UChamane waqala ukuqeqesha ikarati ngo-1966 eneminyaka engu-25 ubudala, wayengenakho konke ukuthembela ekusetshenzisweni kwezikhali ezinobudlova ukuzivikela futhi wabona ukuthi kungenzeka ukuthi ubuciko buzosiza umphakathi wakhe. Ngo-1968, waqala ukuqeqeshwa ngaphansi kukaMnumzane L. T. Zungu. Ngesikhathi uZungu esungula i-School of Karate Kwa-Mashu, uChamane wavele waqokwa njengomsizi wakhe. Ngemuva kokuthola ibhande elinsundu kuZungu, waqhubeka nokuziqeqesha ngaphansi kuka-Sensei Rob Ferriere, omele i-South Africa’s Springbok kanye noMqondisi Oyinhloko we-JKA Shotokan Karate yaseNatali.
UChamane wahlomuliswa nge-First Black Belt ngo-1980 futhi waqhubeka nokushishekela ubuhle kwezobuciko bakhe. Ngo-2012, uChamane waklonyeliswa ngeBanga lesihlanu le-Dan Black Belt futhi muva nje wahlonishwa yi-South African JKA Karate Association ngomklomelo we 30 Years Special Award ngokuzinikela kwakhe kwezobuciko bekarati nakubafundi bakhe.
Uneminya engu-73, manje uChamane usebenza njengomqeqeshi wekarati KwaMashu Indoor Sports Centre (KISC) futhi usaqeqesha no-Sensei Rob Ferriere. Kubukeka kungajwayelekile ukuthi ukufundisa abantu abasha ukulwa kungamisa ubudlova nobugebengu kodwa kungenye yezinto uChamane azama ukuzuza e-KISC. Ukholelwa ekutheni ubuciko bekarati buthuthukisa umqondo wokuzikhuza, busize ukugxila ezingqondweni zezingane azifundisayo nokuzigcina zikude nezinkinga ezivame ukwehlela izingane ezikhula emalokishini .
Umsebenzi wakhe uyaqhubeka nokuba nomthelela omuhle kumalungu omphakathi njengoba edlulisela ulwazi lwakhe entsheni yaKwaMashu.
Categories People Tags Muzomusha Lameck Chamane